Imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu ngekusasa nemiphumela | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu iya ngokuya icace kakhulu. Kunamagagasi okushisa ashuba ngokwengeziwe, izivunguvungu ezishisayo, izivunguvungu eziningi, njll. Ukuze kulinganiswe umonakalo olindelwe ngokuzayo nokwanda kwalezi zimo zezulu ezimbi kakhulu kwenziwe ucwaningo futhi selushicilelwe kumagazini i- "The Lancet Planetary Health".
Ngokwesifundo, izinhlekelele zesimo sezulu zaleli banga zingadala ukufa kwabantu abayi-152.000 ngonyaka kulo lonke elaseYurophu phakathi kuka-2071 no-2100. Lokhu kusho ukuthi abantu ababili kwabathathu abahlala eYurophu ekupheleni kwaleli khulu leminyaka bangathinteka yizimo zezulu ezimbi kakhulu kanye namathuba okufa.
Khulisa ezimweni ezimbi kakhulu
Lolu cwaningo lugxile ekuhlaziyeni imiphumela engaba khona yokuguquka kwesimo sezulu okungenzeka esikhathini esizayo esingekude kakhulu. Phakathi kwayo yonke imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu, ucwaningo lugxile ezinhlekeleleni eziyisikhombisa eziyingozi kakhulu: amagagasi okushisa, amagagasi abandayo, imililo yehlathi, isomiso, izikhukhula nezikhukhula.
Yize ukuqwashisa kungakasakazeki emhlabeni wonke, ukuguquka kwesimo sezulu kungenye yezinsongo ezinkulu kakhulu empilweni yabantu kuleli khulu lama-XNUMX. Kunezingozi eziningi ezandayo ezithinta amadolobha nayo yonke imisebenzi yezomnotho yabantu. Zonke lezi zingozi ziya ngokuya zixhunyaniswa nezinhlekelele ezincike esimweni sezulu.
Ngaphandle kokuthi ukufudumala kwembulunga yonke kuncishiswe ngokushesha futhi kuthathwe izinyathelo ezifanele, abantu baseYurophu abangaba yizigidi ezingama-350 babengachayeka ezenzakalweni zezulu ezimbi kakhulu unyaka ngamunye ngasekupheleni kwekhulu leminyaka.
Njengengxenye yocwaningo lwabo, iqembu likaForzieri lahlaziya amarekhodi ezinhlekelele zezulu ezingama-2.300 ezenzeka eYurophu phakathi kuka-1981 no-2010, ukuze kutholakale ubungozi babantu.
Njengoba sihlaziye kwezinye izindatshana, Noma izinhloso zesivumelwano saseParis bezifinyelelwe, singamisa ukufudumala kwembulunga engaphezu kuka-2 ° C. Ucwaningo luthi amaza okushisa azoba yinto ebulala kakhulu engadala cishe iningi lokufa.
Njengoba ukwazi ukubona, ukuguquka kwesimo sezulu kuya ngokuya kukhula futhi izibikezelo ezilindelekile azikhuthazi nakancane.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu ngekusasa